Baqattoonni Magaalaalee Afriikaa Bahaa Keessaa Weerarri COVID-19 Ennaa Hammaatee Jirutti Rakkoof Saaxilaman
Jarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa baqattoonni magaalaalee gaanfa Afriikaa fi naannoo Great Lakes keessaa kanneen kumaan laka’aman Afriikaa bahaa, gaanfa Afriikaa fi naannoo hara gurguddaa keessa lubbuu ooluuf tarkaanfii hin barbaachisne fudhataa jiran. Sababaa COVID-19n kan ka’e rakkoo dinagdee hamaaf saaxilamuu isaanii UNHCR beeksisee jira.
Vaayiresiin koronaa akka hin facaane ittisuuf jecha mootummaan sochii namootaa ugguruu fi uggura sa’aa kaa’uun walabummaan socho’uu namootaa fi dandeettii isaan galii ittiin jiraatan argatan murteessee jira.
Jarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti baqattoota magaalaa keessa jiraatan tarkaanfii fudhatame kanaan akkaan kan miidhaman yoo ta’u fedhii bu’uuraa guuttachuuf illee hin dandeenye.
Dubbi himaan UNHCR Charlie Yaxley akka jedhanitti baqattoonni magaalaalee keessaa saamichaaf akkasumas liqaaf saaxilaman. Hedduun isaanii lubbuu ooluuf maallaqa argachuuf jecha quunnamtii saalaaf dabarsanii of kennu ykn daa’imman hojiitt humnaatti bobba’u jechuun akeekkachiisan.